မ မုန်း ရက် ပါ ဘူး မောင် – Hlataw.com
ဦးအောင်မောင်း ဟာ ညီဖြစ်သူအစာဆိပ်ဖြစ်ပြီးမျက်စိ ရှေ့မှာသေဆုံးခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အ တွက် သားဖြစ်သူကိုဆရာဝန်ဖြစ်ရ မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မလှိုင် မှာသားကိုကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ထားကာပညာသင်စေခဲ့လူ၊မိမိရွာကို တိုက်နယ်အဆင့်အထိဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီးဆေးရုံတစ်ရုံရဖို့ကြိုး စားနေတဲ့လူ၊ရွာသားတိုင်းကဦး အောင်မောင်းရဲ့စေတနာကိုနား လည်တော့လေးစားကြရတယ်။
မိမိ ငွေကိုအကုန်ခံပြီးအစိုးရဆီမှာဆေး ရုံရဖို့ကြိုးစားခဲ့တော့အစိုးရရဲ့စေ တနာနဲ့ဆယ့်ခြောက်ကုတင်ဆန့်ဆေးရုံလေးတစ်ရုံကိုတည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်ပေမယ့်ဆရာဝန်ကတော့မရှိသေးပါဘူး၊ဆေးကျောင်းပြီးလာတဲ့ သားကိုရွာကိုပြန်လာခိုင်းပေမယ့် သားလေးခန့်ထက်ကျော်ကအမြဲနေမယ်မပြောတဲ့အခါ၊အလည်တစ် ခေါက်တော့လာဖို့ခေါ်တာကြောင့် သားဖြစ်သူရွာကိုလာခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲယမင်းသူဇာတစ်ယောက် လှည်းပေါ်ကအဆင်းခြေခေါက်လဲ တာကြောင့်လမ်းမလျောက်နိုင်တဲ့ အခါမှာ “အား ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်” “ဟေ့ယမင်း နင့်ခြေထောက်က အရမ်းရောင်နေတယ်” “အေးဟယ်တင်တင်ရယ်၊ဆေးခန်း ပြဖို့ကလဲမြို့ကအဝေးကြီး၊ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးဟယ်” “နေဦးယမင်း၊ဘကြီးအောင်မောင်း သားရွာရောက်နေတယ်ဟဲ့၊အဲဒါ ငါသွားခေါ်လိုက်မယ်” “ဘာကြောင့်ဘကြီးဦးအောင်မင်း သားကိုခေါ်ရမှာလဲတင်တင်ရဲ့” “သူကဆရာဝန်လေ” “ဟုတ်လားတင်တင် ဘကြီးအောင်မောင်းမှာသား တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ယမင်းသိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်ဖြစ် မှန်းတော့မသိခဲ့ပါ။
ယမင်းတို့အဖေ တပ်မှာတိုက်ပွဲကျတော့အမေကသူ မွေးဖွားခဲ့ရာဒီရွာလေးမှာပြန်ုပီးအ ခြေချခဲ့တာမို့ဒီရွာလေးကိုရောက်ရှိ ရခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာသူဆိုပေမယ့် ယမင်းဟာအလှပဂေးတစ်ယောက် ပါပဲ။လုံးကြီးပေါက်လှပေါ့။ခုခေတ် စကားအရအကိတ်ပါ။သေးတဲ့မ လျော်ညီစွာတင်သားလုံးလုံးကြီး တွေနဲ့အိုးကားပါတယ်။ရင်သားက တော့အရမ်းမကြီးပါဘူး။ရွာကကာ လသားတွေကြိုက်ကျပေမယ့်အနေ တည်တဲ့ယမင်းကိုမစရဲကြဘူး။မုဆိုးမသမီးပေမယ့်ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေတဲ့ယမင်းရဲဂုဏ်သတင်းဟာ အစွန်းအထင်းမဲ့ပြီးလေးစားရတဲ့အ နေအထားပါပဲ။ “ယမင်းရေ ” “လာလေတင်တင်” တင်တင်နဲ့အတူအမျိုးသားတစ် ယောက်ပါလာတယ်။
ထိုအမျိုးသား ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ယမင်းရင်ထဲနွေး ထွေးတဲ့ခံစားမှု့တခုကိုရရှိလိုက်ရ တဲ့ယမင်းပါးပြင်မှာရှက်သွေးရယ် ဖြာထွက်မိတော့တယ်။တစ်ခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ချစ်စိတ်ဟာခုမှမြင်ဖူး တဲ့လူတစ်ယောက်အပေါ်ယိုဖိတ်စီး ဆင်းခဲ့ရတယ်။ “ယမင်းရေ၊ဒီမှာဆရာလေး ခန့်ထက်ကျော်ပါလာပြီ” “ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ကြွပါရှင်” “ခြေထောက်နာနေလို့ဆို” “ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ကျနော် ခဏ ကိုင်ကြည့်မယ်နှော်” “အိုး အားနာစရာ” “ဘာမှအားမနာနဲ့ကျနော်ဆရာဝန် ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” ဆရာလေးကယမင်းရဲ့ခြေထောက် ကိုအသေအချာကိုင်တွယ်စမ်းသပ် ပြီးနောက်တော့ “သိပ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ခြေခေါက်လဲပြီးအကြောတွေ ယောင်ရမ်းနေတာ၊ဆေးလိမ်းဆေး သောက်လုပ်ရင်ပျောက်ပါတယ်။
ကျနော်ဆေးလိမ်းပြီးဆေးတွေပေး ခဲ့ပါ့မယ်” ယမင်းမှာတော့ဆရာလေးရဲ့ကိုင် တွယ်စမ်းသတ်မှု့မှာရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတော့ဆရာလေးမသိအောင် ဟန်ဆောင်ကာနေရတော့တယ်။ ခြေထောက်ကိုဆေးလိမ်းပြီးပတ် တီးစည်းနှောင်ပေးကာလက်ဆေး ပြီးသောက်ဆေးတွေပေးပါတယ်။ “ကဲကျနော်ပြန်တော့မယ်” “ဆရာရယ်ခြေကြွခလေးယူသွား ပါရှင့်” “နေပါစေဗျာ၊တစ်ရွာတည်းသား ချင်းတွေမယူပါရစေနဲ့” “ကျေးဇူးတင်လို့ပါဆရာရယ်၊ဆရာ့ ကိုမြို့မပြန်ခင်ထမင်းတစ်နပ်တော့ ဖိတ်ကျွေးခွင့်ပြုပါရှင်” “ခြေထောက်သက်သာသွားရင် ကျွေးပါဗျာ” “ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေး” ဆရာလေးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွား တော့ဆရာလေးကျောပြင်ကိုငေး မောကြည့်ကြည့်ပြီးကျန်ခဲ့ရတဲ့ယ မင်းမှာဝေဒနာတစ်ခုခံစားရပြန် တယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးရက်လောက်မှာယ မင်းခြေထောက်သက်သာလာတယ်။
“ယမင်းခြေထောက်သက်သာ ပြီမဟုတ်လား” “အေးတင်တင်” “သက်သာရင်ရွာမှာလုပ်အားပေး ဖို့ခေါ်မလို့” “ဟင် ဘာလုပ်အားပေးရမှာလဲ” “နင့်ဆရာလေးလေ ခုရွာကလူတွေ ကိုဘကြီးအောင်မောင်းအိမ်ကနေပြီးဆေးကုပေးနေတာ၊လူလိုတယ်” “နင်သွားပြီးလုပ်အားပေးလိုက်လေ” “ငါလဲလုပ်ပေးနေတာ၊နီးနားပတ် ဝန်းကျင်ကလူတွေပါရောက်လာလို့ မနိုင်ဘူး၊အခုဆေးရုံကိုရွှေ့ပြီးကုသပေးနေရတယ်၊အဲဒါနင့်လာခေါ်တာ” “အေးပါဟယ်၊ငါကူညီပါ့မယ်” ယမင်းနှင့်တင်တင်မှာဆေးရုံကိုသွားပြီးအကူအညီသွားပေးကြရတယ်။
ဘကြီးဦးအောင်မောင်းတစ်ယောက် မျက်နှာမှာအပျော်တွေနဲ့မြင်ရတော့ ယမင်းစိတ်ချမ်းသာမိတယ်။ “ဟာ ယမင်းလိုက်လာတယ်” “ဟုတ်တယ်ဆရာ၊လူလိုတယ်ဆိုလို့” “ခြေထောက်သက်သာသွားပြီလား” “သက်သာသွားပြီဆရာ” “ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ” ဆရာဝန်လေးဟာလူနာတွေတစ် ယောက်ပြီးတစ်ယောက်စမ်းသတ် ကုသပေးနေတယ်။ယမင်းတို့က တော့လူနာကိုအလှည့်ကျခေါ်ပေး တယ်။
ဆရာဝန်လေးပြောတဲ့ဆေး တွေကိုပေးတယ်။နေ့လည်ကျတော့ ခနနားကြတယ်။ဦးအောင်မောင်း အိမ်ကစားစရာတွေလာပေးတော့ စားသောက်ကြရင်း “ယမင်းတို့လာကူညီတော့အားရှိ တယ်ဗျာ။အဖေကသူ့ရွာကိုရောက် တော့လူနာတွေဆေးကုပေးခဲ့ပါဆို လို့ကျနော်ကုနေရတာ” “ကုသိုလ်ရပါတယ်ဆရာ” “ကုသိုလ်ရတာတော့မှန်ပါတယ်၊အဖေကရွာမှာနေစေချင်တယ်၊ဒါပေ မယ့်ကျနော်ကရွာမှာနေရတာအ ဆင်မပြေဘူးဗျာ။ကျနော်ကအထူးကုဖြစ်ချင်တော့ရန်ကုန်မှာပဲအဆင်ပြေတယ်” “ဟုတ်တာပေါ့ဆရာရယ်၊အခုလိုမျိုး ကျမတို့ရွာမှာဆရာ့လိုစေတနာမေတ္တာနှင့်ကုသပေးမယ့်ဆရာဝန်တစ် ယောက်လိုအပ်နေတာ” “သိပါတယ် ယမင်းရယ်” “ဆရာရွာမှာမပျော်တာမြို့မှာရှိတဲ့ ချစ်သူကိုများလွမ်းနေလို့လား” “မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ကျနော်မှာလွမ်းရမယ့်သူမရှိသေးပါဘူး” ယမင်းမေးချင်နေတဲ့မေးခွန်းကိုသိလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိ တယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး၊ဆရာလေးအနားနေရတာယမင်းအရမ်းပျော်နေမိတယ်။ဆရာလေးမျက်နှာ ကိုလည်းခနခနငေးမောကြည့်မိတယ်။ “အော်ဆရာရယ် မပြန်ပါနဲ့လား၊ယမင်းဆရာပြန်သွား ရင်လွမ်းနေရတော့မှာ” ရင်ထဲကနေပြီးတွေးနေမိတယ်။ဆ ရာလေးကိုယမင်းချစ်မိနေပြီလေ။ “ယမင်းမနက်ဖြန်ဥပုတ်နေ့လေ၊နင် ဘုရားသွားဦးမလား” “အေးလေသွားမှာပေါ့” “မယမင်းကဥပုတ်နေ့တိုင်းဘုရား သွားတာလား” “ဟုတ်တယ်ဆရာ” “ဘယ်သူ့အတွက်များဆုတောင်း ပေးနေတာလဲ” “ဆုတောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး ဆရာ၊ဥပုတ်နေ့တိုင်းဘုရားရင်ပြင် ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်၊ပန်းဆီမီး ကပ်တာပါ” “အော် ဟုတ်လား” ဒီလိုနဲ့ဆေးခန်းမှာဆယ်ရက်ခန့်ဆေး ခန်းထိုင်ပေးပြီးနောက်မှာယမင်းနဲ့ ဆရာလေးတို့တော်တော်ရင်းနီးလာ ကြပြီးဆရာလေးဟာယမင်းထက် တနှစ်လောက်ငယ်မှန်းသိလာတယ်။
တင်တင်ကယမင်းနဲ့ဆရာလေးစ ကားပြောနေရင်မသိမသာနဲ့ရှောင်ထွက်ပေးတတ်တယ်။တနေ့တော့ “ယမင်းကျနော်ပြန်ရတော့မယ်ဗျ” “ရှင် ဘာလို့လဲဆရာ” “ကျနော်ရန်ကုန်ကအထူးကုဆေးရုံ ကြီးတစ်ခုမှာအလုပ်လျောက်ထားတာရပြီ” “အော် ..ဆရာရယ်” ရင်ထဲဆွေးမြေ့သွားရတဲ့သူက ယမင်းသူဇာရယ်ပါ၊ “ဆရာကတော့ပျော်နေမှာပေါ့နှော်” “ယမင်းရယ် ပျော်ရာမှာမနေရတော် ရာမှာနေရမယ်မဟုတ်လား၊ကျနော် ဆရာဝန်ကြီးတွေဆီကပညာတွေ ထပ်သင်ရအုံးမယ်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ” “ယမင်းကျနော်စကားတစ်ခုပြော ချင်လို့” “ပြောပါဆရာ၊ယမင်းနားထောင် နေပါတယ်” “ယမင်းကျနော့်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နှော်” “ဆရာရယ်ယမင်းဆရာ့ကိုဘာလို့ စိတ်ဆိုးရမှာလဲ” “ကျနော်ပြောမယ့်စကားကိုသေချာ နားထောင်ပေးပါယမင်း” “ဟုတ်ကဲ့ဆရာ” “ကျနော်ယမင်းကိုချစ်နေတယ်ဗျာ” “ရှင်” ယမင်းအံ့ဩသင့်သွားတယ်။
မည်သို့ အခါကမှချစ်ဟန်မပြခဲ့တဲ့ဆရာက အခုကျမှယမင်းကိုချစ်တယ်တဲ့လား အရမ်းလဲဝမ်းသာမိတယ်။ “ယမင်းစိတ်ဆိုးသွားပြီလား” “မဆိုးပါဘူးဆရာ” “ဒီလိုဆိုယမင်းရဲ့သဘောထားကို ပြောပါဦး” “ဆရာရယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခုချစ်ရေးဆို၊အခုအဖြေပေးရ တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဒါပေမယ့် ယမင်းကဆရာ့ကိုအရင်ချစ်ခဲ့တာပါ” “ဗျာ..တကယ်နှော်ကျနော်အရမ်း ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ” “ယမင်း” “ရှင် ဆရာ” “ဟာဗျာ အခုထိဆရာပဲလားဗျာ” “ယမင်းကလဲအခေါ်တစ်ခုခုတော့ ပြောင်းသင့်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်” “ဟာ ချစ်လိုက်တာယမင်းရယ်” မောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီးကျမပါး ပြင်ကိုနမ်းလိုက်တော့ယမင်းရင်ထဲ ဗလောင်ဆူသွားတော့တယ်။
မိမိချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကမိမိကိုဖက်ုပြီးနမ်းရှိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုနဲ့ထိတွေ့ မှု့မရှိတဲ့ယမင်းမှာရင်ထဲတသိမ့်သိမ့် တုန်သွားရတာပေါ့။မောင့်အနေနဲ့ ကတော့ထူးခြားမယ်မထင်ပါ။လူ နာအမျိုးသမီးများကိုသူကအကြိမ် ကြိမ်ထိတွေ့ဖူးသူလေ။ပြီးတော့ မမြင်ဝံ့ဆေးသမားခေါ်တာကိုး ယမင်းမှာဖြင့်ပိပိထဲကတောင်စိုချင် သလိုဖြစ်သွားရတယ်။ “ယမင်း မနက်ဥပုတ်နေ့ဘုရားသွား ဦးမှာလား” “သွားရမှာပေါ့မောင်” “မောင်လဲလိုက်ခဲ့မယ်ယမင်း” “လိုက်ခဲ့လေမောင်” ဘုရားကိုမောင်နဲ့အတူသွားလိုက် ကြတယ်။ပြီးတော့ဆေးခန်းကိုသွား တော့ဥပုတ်နေ့မို့ဘယ်သူမှဆေးခန်း ကိုမလာကြပါဘူး။မောင်နှင့်ယမင်း နှစ်ယောက်တည်းသာရှိတယ်။
တင် တင်ကလည်းလူပါးတဲ့ရက်မို့မလာ ဘူးပြောသွားပြီးသူ့အဖေနှင့်အမေ ဥပုတ်စောင့်မှာမို့ဆွမ်းချက်ပို့ရမှာ လို့ပြောသွားတာကြောင့်ဆေးရုံမှာ မောင်နှင့်ယမင်းသာရှိတယ်။နှစ် ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိက ယမင်းရင်ထဲတမျိုးဖြစ်မိတယ်။ဒီ ကြားထဲမောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီး “ယမင်း မောင်အရမ်းချစ်တယ်” “အို! မောင်လွှတ်ကွာ၊ယမင်းမော လှပြီ” “မလွှတ်ဘူးကွာ၊ဒီနေ့မှမောင်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရတာ” “မောင်ကလဲအဆိုးနဲ့ကွာ” “ချစ်လို့ပါယမင်းရယ်” မောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီးယမင်း နှုတ်ခမ်းကိုလာနမ်းစုပ်တယ်။ယမင်း ရင်ထဲတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ရှင်။ တလှိုက်လှိုက်တက်လာတဲ့ရင်ခုန် မှု့နဲ့အတူပိပိအတွင်းသားတွေစိုလာ တယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းရယ်မသိဘူး မောင့်အနမ်းကိုယမင်းပြန်တုန့်ပြန် မိတယ်။နောက်တော့မောင်က ဆေးခန်းရဲ့တံခါးကိုပိတ်လိုက်တယ် “မောင် ဘာလို့ပိတ်တာလဲကွယ်” “တခြားလူတွေမြင်မှာစိုးလို့ပါ” “အာမောင်ကလဲလူတွေလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ” “ဒီနေ့မလာပါဘူးယမင်းရယ်” ပြောရင်းနဲ့ယမင်းကိုပွေ့ချီကာ ဆေးခန်းကလူနာစမ်းသပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ကာအင်္ကျီကြယ်သီး များကိုဖြုတ်ပြီးဘော်လီချိတ်ကို ဖြုတ်တယ် “မောင် ယမင်းကြောက်တယ်” “မကြောက်ပါနဲ့ယမင်းရယ်” တစထက်တစအတင့်ရဲလာတဲ့မောင် ကြောင့်ယမင်းမှာအသက်ရှူတာ မမှန်ချင်တော့ပါဘူး။ပက်လက်က လေးဖြစ်နေတဲ့ယမင်းပေါင်ကြားကို မောင့်ရဲ့လက်ကရောက်လာတယ်။ ယမင်းတားဆီးနေပေမယ့်အားအင် တွေကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေရတယ်။
ပိပိကိုအပေါ်ကနေအုပ်ကိုင်ပြီးပွတ်ပေးနေတော့ယမင်းဘယ်စိတ်ထိန်း ထားသော်လည်းပိပိကတော့မထိန်း ပါ။သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပြီးအရည် များကအတွင်းခံဘောင်းဘီအထိစိုရွှဲလာသည်။မောင်ကအတွင်းခံ ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်တော့ယမင်း မှာမျက်နှာပူပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါး နှင့်အုပ်လိုက်မိတဲ့ခနမှာမောင်က ယမင်းရဲ့ဆီးခုံကြီးပေါ်ကိုမျက်နှာ အပ်ပြီးနမ်းရှိုက်လေတော့ “ဟာ မောင်မလုပ်ရဘူးလေ၊ဘုန်းကံ တွေနိမ့်ကုန်ပါ့မယ်” စိုးရိမ်တကြီးတားမြစ်လိုက်ပေမယ့် မောင်ကယမင်းရဲ့ပိပိကိုလျှာပြား ကြီးနဲ့အပြားလိုက်ယက်ချလိုက် တယ်။
“အိုး !မောင်မလုပ်ရဘူးလေကွယ်” မည်သို့ပင်တားဆီးစေကာမူမောင့် လျှာဖျားကယမင်းရဲ့အဖုတ်အကွဲ ကြောင်းထဲတိုးချဲ့၍ဝင်လာသည်။ “အာ့ ! အင်းးဟင်းးးဟင်းးး” “အား မောင် မလုပ်နဲ့ကွာ၊အား ကျွတ် ကျွတ်” မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးအော်လိုက် သည်။ကြက်သီးထပြီးခါးပါကော့ သွားရတယ်။ပထမဆုံးပိပိယက်ခံရတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပြန်သည်တားမြစ်နေပေမယ့်လုပ်ချင်ရာလုပ် လုပ်နေသောမောင့်ကိုစိတ်မဆိုးမိပဲအားနာလှ သည်။ဘုန်းနိမ့်မှာလဲစိုးရိမ်သွားပြီး အတင်းပင်ကိုမောင့်လက်ကိုဆွဲယူ လိုက်ရာမောင်ကအလိုက်သင့်ပါပြီးယမင်းရဲ့အပေါ်တက်လာကာ ယမင်းပေါင်နှစ်ဘက်ကိုကားပြီး ဒူးထောက်လိုက်သည်။
ထိုနောက့် ယမင်းပိပိအဝကိုတေ့ပြီးအသာဖိ ထည့်တော့ “ဗျစ် ဗျစ်ဗြိ” “အာ့! မောင်နာတယ်” အလိုးခံရပြီဆိုတဲ့အသိကရင်ထဲ လှိုက်ကနဲဝင်လာပြီးအပျိုရည်ပျက် ပြီဆိုပြီးစိတ်ထဲခံစားရပြီးဗိုက်ကြီး မှာလဲစိုးရိမ်သွားရသည်။သို့သော် ဗိုက်မကြီးစေရန်ဆေးခန်းတွင်းအသင့်ရှိနေသောတားဆေးအား သောက်လျှင်ရသည့်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကလျော့ပါးစေသည်။ထို့အတူ သိပ်ချစ်ရတဲ့မောင့်အတွက်ယမင်း ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုပေးဆပ်ရတာလဲကျေနပ်ပါတယ်” မောင်ကယမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ် နမ်းပြန်တယ်။စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်ရသည်ကိုနားမလည်နိုင်ပေ။ စိုးရိမ်စိတ်တို့လျော့ပါးလာပြီးကာမ စိတ်တို့ပြန်သက်ရောက်လာကာ ပြန်ပြီးစုပ်နမ်းမိတော့တယ်။
နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကပိပိထဲမသက်ရောက်တော့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု့နဲ့အတူပိပိအ တွင်းသားကစုပ်ယူသလိုလှုပ်ရှား လာတော့ယမင်းလဲအံ့ဩမိတယ်။ မောင်ကတော့စုပ်နမ်းပြီးနောက် မှာဆတ်ကနဲ့လှုပ်ရှားပြီးဖိသွင်း လိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ဖောက် ဗျိ” “အာ့.. အိုး.. အင်း..ဟင်းး..ဟင်း..” တိုးဝင်လာတဲ့လီးကြောင့်အပျိုမှေး ဖောက်သွားတာကိုသိလိုက်ပြီးယ မင်းမှာစပ်ဖျင်းဖျင်းဝေဒနာကိုခံစား လိုက်ရသလို ထူးဆန်းတဲ့အရသာ တမျိုးကိုပါပူးတွဲသိလိုက်ရတယ်။ ဆက်ပြီးလိုးမှာကိုလဲကြောက်နေတယ်။မောင်ကတော့ဆက်ပြီးမလှုပ် ရှားပဲလီးကိုအဆုံးထိသွင်းထားပြီး ယမင်းနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းနေပြန် တယ်။မောင့်ကြောင့်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုကျေနပ်စွာခံယူမိပြီးမောင်တ်ယောက်အဆင်ပြေစေဖို့သာတွေးမိတော့တယ်။
တင်းကျပ်ကျပ်တစ်ဆို့ဆို့ဝေဒနာနှင့်အတူပိပိအတွင်းသားလှုပ်ရှား လာပြီးအရည်တွေပိုထွက်သလိုခံ စားရလာတယ်။တကယ်တမ်းတော့ ယမင်းလဲခံနိုင်ပါပြီသို့သော်မောင်ကဆက်မလှုပ်ရှားပဲယမင်းရဲ့နို့တွေကိုပါပွတ်သပ်ပေးတဲ့အခါအလိုလို ညည်းမိတယ်။
ညည်းသံထွက်မှ မောင်ကလီးကိုတဖြေးဖြေးနှင့်နှုတ် ယူပြီးဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ် လုပ်တော့တယ်။အစေ့ကိုလဲထိသလိုအတွင်းနှုတ်ခမ်းသားများကိုပွတ် ဆွဲသွားတဲ့မောင့်လီးကြောင့်ပိပိကအရသာတမျိုးကိုပါခံစားလိုက်ရ သည်။ “ဖွတ်!ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်မိနေသလို လီးကတဇွိ ဇွိ တဗျိဗျိ ဝင်နေတော့ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးညည်းမိတော့ တယ်။နည်းနည်းမြန်လေအရသာ တွေ့လေပိုညည်းမိတော့တယ်။
“ဗျစ်….ဘွတ် ..ဖတ်….ဖတ် ဖန်းဖန်းးး” “အင့်… အိုးးအင်းးဟင်းးဟင်းး” ဘယ်လိုသဘောကြောင့်ရယ်ယမင်းမသိတော့မောင့်ခါးကိုသာအတင်း ဖက်ထားပြီး နေချင်တော့တယ်။ ခါးကိုလှမ်းဖက်တော့လိုးတဲ့အရှိန် နှေးချိန်မှာတော့ယမင်းအား မရတော့ပေ။ခါးကိုလွှတ်လိုက်ပြီး မြန်မြန်ဆောင့်စေဖို့သာခါးကိုလှမ်းဆွဲပြန်တွန်းတဲ့အမှု့ကိုမသိစိတ်ထဲကလုပ်ပေးနေမိပြီးမောင်မြန်လာ သည်နှင့်အမျှ “ဖွတ် ဖတ် ဗျိ ..ဗျစ်ဖန်းးးဖန်းဖန်း” “အာ့!ရှီးးရှီးးး အိုးးအားအင်းဟင်းး” ကြားဖူးနေသောကာမအမှု့ပြီးတယ် ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပြီးအထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက် ရတော့တယ်။
“ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဖန်း” “အား..ရှီးး….ရှီးး…အိုးးး…” ပိပိအတွင်းလှုပ်ရှားမှု့များနှင့်အတူ ယမင်းမှာအရည်တွေစီးဆင်းသွားသလိုခံစားလိုက်တယ်။ဆက်လက် မညည်းနိုင်တော့လောက်အောင် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်သွားပြီး ငြိမ်သွားရတယ်။မောင်ကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးဆက်လုပ်ရာ ယမင်းလဲသူပြီးအောင်လုပ်ပါစေ ဆိုပြီးလွှတ် ထားလိုက်တယ်။ယမင်းပြီးပြီး ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါမှာတော့ မောင်ဆီက “အင်းး..အားးး ရှီးးး..ရှီး ဟားးး” တနှာသံထွက်လာပြီးအတင်းလိုး တော့တယ်။
မကြာပါဘူး၊ပိပိထဲပူ နွေးနွေးသုတ်တွေဝင်လာပြီးမောင်ကသူ့လီးကြီးကိုအဆုံးထိသွင်းပြီး နောက်ကော့ပြီးပန်းထည့်လိုက်ရာအဖုတ်ထဲသုတ်ရည်တို့ပြည့်လျှံသွားတော့တယ် ထိုနောက်တော့မောင်ကယမင်းကို နမ်းကာ “ယမင်းနာသွားလားဟင်” “အရမ်းနာတယ်မောင်” “ဟုတ်တယ်နာမှာယမင်း၊မောင် ယမင်းသက်သာအောင်ဆေးပေး လိုက်မယ်” “အရေးကြီးတာကယမင်းအရှက်ကွဲ မှာပဲကြောက်တယ်မောင်” “အဲဒီအတွက်လဲမပူပါနဲ့ယမင်း၊ဒီမှာ ဆေးတွေရှိပါတယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်” ဆေးတွေတိုက်တော့ယမင်းသောက် လိုက်တယ်။ညနေစောင်းတော့ယ မင်းတို့အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ရက်တော့မောင်ရန်ကုန်ပြန် သွားတော့လွမ်းရသူမှာ ယမင်းဖြစ် သည်။လွမ်းရတိုင်းမောင့်အတွက် ရည်စူးပြီးဘုရားတွင်ပန်းလှူပြီး မောင်တစ်ယောက်သွားလေရာ ခလုတ်မထိစူးမငြိစေကြောင်းအခါ ခါဆုတောင်းမိသည်။ “ယမင်းရေ” “လာဟေ့ တင်တင်” “လွမ်းနေတာလား” “ဘာကိုလွမ်းရမှာလဲ” “ကောင်မ ငါမသိတာကျလို့” ယမင်းထိတ်လန့်သွားသည်။ ဘာတွေများတင်တင်သိနေသလဲဟူ၍ပင် “နင်လေ ဆရာလေးကိုချစ်နေတာ မဟုတ်လား” “ကိုယ်ကသာချစ်ရပေမယ့်သူက ကိုယ့်ကိုသတိတောင်ရပါ့မလား၊ မြို့သူအချောအလှတွေနဲ့ပျော်နေ မှာပါဟယ်”
“အင်းလေ” “သူကချစ်တယ်ဆိုပါဦးတော့၊ဘကြီးအောင်မောင်းကရောငါလိုမုဆိုးမ သမီးနှင့်သဘောတူနိုင်ပါ့မလား” “ဒီမှာယမင်း၊ဘကြီးအောင်မောင်း ကသူ့သားသာရွာသူတစ်ယောက် ယောက်နဲ့ကြိုက်ပြီးသူ့သားရွာမှာအ ခြေချတာကိုလိုလားတယ်သိလား” “ရွာမှာလည်းပိုက်ဆံရှိအသိုင်းအ ဝိုင်းတွေပေါတယ်လေ” “အမလေးသူ့သားသာတကယ်ချစ်လို့ကတော့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ပေးစား ချင်နေတာဟ” “ဟုတ်ရဲ့လားတင်တင်ရယ်၊မိဘဆိုတာသားသမီးကိုဆင်စီးလို့မြင်းရံ တာပဲမြင်ချင်ကြတာလေ” “အေးနှော် အဲဒါလဲဟုတ်သားပဲ” တကယ်တမ်းမှာရင်မောရသူက ယမင်းပါ။
ဘဝမှာမောင့်တစ်ယောက်တည်းချစ်မိပြီးမောင့်ကိုပဲတ သက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ချင် တယ်။မိမိကိုမချစ်လို့ပစ်ခွာသွား လည်းမိမိအပျိူစင်ဘဝကိုယူသွား တဲ့မောင့်ကိုအပြစ်မမြင်တဲ့အချစ်နဲ့ ဆက်ချစ်သွားမှာပါ “မောင်ရယ် ယမင်းအရမ်းလွမ်းရ တယ်ကွာ” ဒီလိုနဲ့သုံးလလောက်အထိမောင်က ရွာကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ နေလာခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်လဲယမင်း ကတော့ဥပုတ်နေ့တိုင်းမောင့်ကိုရည် စူးပြီးဘုရားမှာပန်းလှူနေဆဲပါ။
တနေ့တော့ “ယမင်းရေ “ဘာလဲတင်တင်” “ငါရန်ကုန်ကိုခနသွားချင်တာ၊ငါ့ တို့ဒေါ်လေးနေမကောင်းလို့တဲ့လှမ်း ခေါ်တယ်၊ငါတစ်ယောက်တည်းလဲ မသွားရဲဘူး၊နင်အဖော်လိုက်ခဲ့ပေး ပါလားဟယ်” ယမင်းလဲမောင့်ကိုတွေ့ချင်နေတာ နှင့် “ငါအမေ့ကိုပြောရဦးမယ်” “ငါလဲကူပြောပေးပါ့မယ်ယမင်း” တင်တင်အဒေါ်နေမကောင်းတာ ယမင်းအမေသိလို့ယမင်းအား တင်တင် နဲ့အတူရန်ကုန်ကိုလွှတ်ပါတယ်။
ရင်ထဲမှာမချိအောင်နာမိတယ်။ယမင်းကဆေးခန်းရှေ့ကစုံစမ်းရေးကောင်တာကိုသွားပြီး “ညီမလေး ဒေါက်တာခန့်ထက် ကျော်ကဒီဆေးရုံမှာလုပ်တာလား” “ဘာဖြစ်လို့လဲမမ” “ခုနကတွေ့လိုက်လို့” “မမနဲ့ဘာတော်လို့လဲ” “မမကသူတို့ရွာကရပ်ဆွေရပ်မျိုး တွေပါညီမလေး” “အော် ဟုတ်လား မမ” “ခုနကသူနဲ့အတူပါသွားတဲ့ဒေါက် တာကရော” “သူတို့ကချစ်သူတွေလေမမ” “အော်” “မမက်မဘာကူညီရမလဲ” “ရပါတယ်ညီမလေး၊ကျေးဇူးပါ ညီမလေး” ပိုသေချာသွားပြီ၊ယမင်းကိုချစ်တယ် ဆိုတဲ့မောင်ကယမင်းအပြင်နောက် တစ်ယောက်ထားနေတာပဲ နောက်တနေ့တော့ယမင်းမောင့်ကို မပြောမဖြစ်ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မောင်ရှိရာကိုရှာလိုက်တယ်။
မောင့် ကိုမောင့်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တယ် “မောင်” “ဟင်ယမင်း” “ဘာ ဘာလာလုပ်တာလဲယမင်း” “မောင့်ကိုသတိရလို့လွမ်းလို့မောင့် ကိုလာတွေ့တာပါ” “ကိုကိုအဲဒါဘယ်သူလဲ” “ဒေါက်တာ မောင်ကအမရဲ့ချစ်သူ ပါ” “ယမင်း မင်းးမင်းးဘာတွေပြောနေ တာလဲ” “ယမင်းအမှန်အတိုင်းပြောတာပါ ဒေါက်တာ” “ယမင်း မင်းကွာ” မအော်စဖူးအော်ငေါက်နေတဲ့မောင့် ကိုကြည့်ကာယမင်းမျက်ရည်ဝဲလာ တယ်” “မောင် ယမင်းကိုမေ့နိုင်ပြီမဟုတ် လား၊မေ့လိုက်ပါမောင်၊မောင့်ကိုယမင်းမမုန်းရက် နိုင်ပါဘူးမောင်” ယမင်းပြောပြီးထွက်ခဲ့တယ်။
ဒါပေ မယ့်နောက်ကအသံတွေကိုကြားနေ ရဆဲပါ။ “ဒီမှာကိုကို ၊ကိုကိုဘာတွေရှုပ်ခဲ့တာ လဲ၊ရွှေဇင့်ကိုတမင်များအရှက်ခွဲနေ တာလားကိုကို၊ဒါမျိုးတော့လာမကျောနဲ့ကိုကို၊ကိုကိုရွှေဇင့်ကိုရွေးမှာ လာ၊ဒါမှမဟုတ်အဲဒီတောသူကိုရွေး မှာလား၊ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်၊ အဲဒီတောသူကိုရွေးချင်ရင်လိုက် သွား၊ရွှေဇင့်အတွက်ယောက်ျားမရှားဘူး” “ရွှေဇင် ရွှေဇင်” ယမင်းနောက်ကမောင်လိုက်မလာခဲ့ ပါ။ဒါပေမယ့်ယမင်းကျေနပ်ပါတယ်လေ။ယမင်းရွာပြန်ခဲ့တယ်။ မောင့်ကိုမုန်းမရတဲ့အပြင်ပိုလို့တောင်လွမ်းမိတယ်။
ညကိုးနာရီခန့်ရောက်တော့ “ဟေ့ခင်လှ ခင်လှ” ဘကြီးအောင်မောင်းကအမေ့နာ မည်ကိုခြံရှေ့ကခေါ်တယ် “လာပြီ၊လာပြီကိုကြီးအောင်မောင်း၊ဘာကိစ္စများအရေးတကြီးရှိလို့ည ကြီးမင်းကြီး” တံခါးဖွင့်ရင်းအမေကမေးတယ် “အေးအရေးကြီးတယ်၊ဘယ်မှာလဲ နင့်သမီးယမင်းသူဇာ” “ရှင် ဘကြီးသမီးရှိတယ်” “ခနလာခဲ့ဦးသမီး” “ဟုတ်ကဲ့ဘကြီး” ယမင်းသူဇာ ခြံဝဘက်ကိုထွက် လိုက်ပြီးဘကြီးကိုတွေ့တယ်။
“မခင်လှ” “ရှင်ကိုအောင်မောင်း” “ငါတစ်ခုပြောမယ်၊နင့်ကိုအားမနာ လို့မဟုတ်ဘူးနှော်” “ရှင်ဘာများဖြစ်လို့လဲကိုအောင် မောင်း” “ငါလူဆိုးဖမ်းလာတယ်” “ဟင်ဘယ်မှာလဲလူဆိုး” အထိတ်တလန့်နဲ့မေးလိုက်တယ် “ဟေ့ကောင်လာခဲ့စမ်း” “ဟုတ်ကဲ့အဖေ” ဘကြီးနောက်ကအသံထွက်လာပြီး အိတ်တစ်လုံးနှင့်မောင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင့်ပုံကညင်းသိုးသိုးပုံ ဖြစ်ပြီးဆံပင်များပင်ရှည်နေတယ်။
“ဟင် မောင်” “မခင်လှဖြစ်သမျှအကြောင်းကို ငါနင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။နောက် မှလူကြီးစုံရာနှင့်လာတောင်းပန်ပါ့ မယ်” “ဟုတ်ဟုတ်” ဘာမှန်းမသိပဲအမေကတဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်နေရှာတယ်။ “သမီးယမင်း၊ဒီကောင်အရက်သ မားဖြစ်နေပြီသိလား၊အရင်ကအ ကြောင်းတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးငါ့သား ကိုပြုပြင်ပေးဖို့သမီးဆီငါအပ်တယ်၊ ဟေ့ကောင်သမီးကိုတောင်းပန်လိုက်” “ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေ” “မခင်လှ ငါ့သားကိုဒီမှာပဲသိပ်လိုက် တော့မနက်ဖြန်ငါရွာကရပ်မိရပ်ဖ တွေကိုပြောပြီးမင်္ဂလာရက်မြန်းမယ်” “ရှင်” “အမလေးကိုအောင်မောင်း၊ဒီကိစ္စ ဆိုတာဟင်းရွက်ကန်စွန်းရွက်ဝယ် သလိုမျိူးမဟုတ်ဘူးနှော်၊
အမေကလဲစောစောစီးစီးအိပ်ရာထဲဝင်သွားတော့တယ်။ “မောင်ရေချိုးလေ” “ဘယ်မှာချိုးရမလဲယမင်း” “ယမင်းပြမယ်” ယမင်းမောင်ရေချိုးမယ့်နေရာကို လိုက်ပြတော့ “ယမင်းမောင့်ကိုစိတ်မဆိုးဘူးလား” “မဆိုးပါဘူးမောင်ရယ်” “မောင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါယမင်း၊မောင် လေယမင်းအပေါ်သစ္စာရှိစွာနဲ့တ သက်လုံးရိုးမြေကျချစ်သွားပါ့မယ်”
“ယမင်းယုံပါတယ်မောင်၊ရေအရင် ချိုးလိုက်နှော်မောင်၊မြန်မြန်ချိုးအ အေးမိမယ်၊ယမင်းမောင့်အတွက် တမင်းပွဲပြင်လိုက်မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါယမင်း” မောင်ရေချိုးပြီးရင်စားဖို့ထမင်းပွဲ ပြင်လိုက်တယ်။မောင်ရေချိုးပြီး အဝတ်အစားလဲကာထမင်းစား တယ်။ထမင်းစားပြီးတော့ “အိပ်ကြမယ်ယမင်း” “ဟုတ်ကဲ့မောင်” ယမင်းအိပ်ခန်းထဲကိုပဲမောင့်ကိုခေါ် လိုက်တော့မောင်ကပြုံးပြီးတစ်ခါမှမပိတ်ဖူးသောယမင်းအိပ်ခန်းတံခါး ကိုပိတ်ပြီးမီးမှိတ်လိုက်တော့တယ်။(ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေး ဗျင်းပြီ)